Abona bahleli beefoto zibalaseleyo kwi-intanethi ukubuyisela imifanekiso yakho | Iindaba zeGajethi
UIgnacio Sala | | Ukufota, software
Ikhangela i Umhleli wezithombe kwi-Intanethi? Xa uhlela iifoto zethu, nokuba uzisika, uhlengahlengise umbala, uhlengahlengise amagophe ... okanye ukwenza naluphi na uhlengahlengiso, sinenani elikhulu usetyenziso olufana neFotohop, iPixelmator, iGIMP... kodwa kwiimeko ezininzi inani elikhulu lokukhetha elisinika lona alisivumeli ukuba siziqhelanise nabo kwaye sibenze umhleli wethu owuthandayo.
Ukongeza, olu hlobo lwesicelo luhlala kwinxalenye enkulu yehard drive yethu, indawo esinokuthi siyisebenzisele ezinye iinjongo. Ngethamsanqa, kwi-Intanethi sinokufumana iinkonzo ezikwi-Intanethi ukwenza nawuphi na umsebenzi. Kule nqaku siza kukubonisa ukuba zeziphi ezona zicelo zibalaseleyo zokuhlela iifoto kwi-intanethi, ngaphandle kokukhuphela nasiphi na isicelo kwikhompyuter yethu.
Ewe kunjalo, abapapashi abakwi-Intanethi abasivumeli ukuba senze imisebenzi efanayo ukuba singafumana isicelo esizinikeleyo esifakwe kwikhompyuter yethu, kodwa zingaphezulu ngokwaneleyo kwiimfuno zabasebenzisi abaninzi abanesidingo sokuhlela ifoto enye okanye ezingaphezulu, ezinje ngokutyala umfanekiso, ukulungisa ukuqaqamba okanye umahluko, jikelezisa umfanekiso ...
1 I-Photoshop Express
Asinakuqala olu luhlu ngaphandle kokuba Inguqulelo ekwi-Intanethi ethi iAdobe Photoshop isisebenzise. I-Photoshop ayisosicelo esijolise kwabo basebenzisi bongeza iifilitha nakweyiphi na ifoto. Kwaye ayisiniki ithuba lokongeza izakhelo. Nangona kunjalo, sesona sixhobo silungileyo sinaso kwi-intanethi ukuba sifuna ukuzama ukuphucula ukubonakala kweefoto zethu.
Ingxaki kukuba ukusebenza kwayo akululanga kwaphela ngaphandle kwe-bat, nangona sinokukhangela kancinci kwiimenyu ezahlukeneyo ezinikezelayo, sinako yazi yonke into ethi Photoshop Express isivumele ukuba siyenze, kubandakanya ukusetyenziswa kwamanqanaba, omnye wemisebenzi eyenza i-Photoshop ibe ngumhleli weefoto zobungcali.
Ukuze usebenzise i-Photoshop Express, njengabahleli abaninzi be-intanethi, Kuyimfuneko ukuba sibe neAdobe Flash efakiweyo kwikhompyuter yethu, isoftware ekufuneka ikhutshelwe kuphela iwebhusayithi esemthethweni yeAdobe, ngokusebenzisa ikhonkco elilandelayo. Awusoze ufake le software kwiindawo zangaphandle ngaphandle kweAdobe, kuba inokuba ngumsele we-malware, ii-virus, iTrojans kunye nokunye.
Siyabona ngoku Kizoa, inkonzo yokuhlela iifoto kwi-Intanethi ukongeza ekusivumeleni yolula, yenza isityalo, usethe iifoto zethu ngonqakrazo olumbalwa, ikwabonelela ngeefreyimu ezingama-200 ukwenza ezakho iifoto ezizithandayo ukongeza kumathuba okongeza ukuya kuma-80 okucoca ezahlukeneyo, eziya kuthi zisivumele ukuba sizitshintshe ngokupheleleyo iifoto zethu kwaye sifumane iziphumo ezinomtsalane. Iifreyimu ezikhoyo ayizizo ezimnyama nezimhlophe esiqhelekileyo esinokuzifumana kuninzi lwezicelo zeselfowuni, kodwa endaweni yoko zisinika inani elikhulu lezakhelo ezilinganisa ngokugqibeleleyo izakhelo zemifanekiso.
Ke lithuba lika HLELA.org, Iprojekthi yaseSpain ekhula kwinqanaba elifanelekileyo labasebenzisi kwaye inikezela ngeqonga le-Intanethi apho sinokwenza khona uyilo lwethu kulo naluphi na uhlobo lwesixhobo (ikhompyuter, ithebhulethi, i-smartphone) kunye nokufikelela kugcino lwedatha lamawaka emifanekiso engenamalungelo obunini . Esi sixhobo silula kakhulu ukuba sisebenzise kwaye siyilelwe ngokukodwa abo baxhasi bancinci bangenako ukufikelela kubayili abaziingcali kwaye kufuneka benze ubuchule babo ngendlela ebukhali kunye nesiphumo esihle sokugqibela.
Omnye weefoto zomhleli ezipheleleyo kwi-Intanethi esinokuzifumana kwi-Intanethi ukuguqula iifoto zethu ngaphandle kokukhuphela isoftware kwikhompyuter yethu UBefunky, Inkonzo yewebhu esivumela, ukongeza ekunqumeni iifoto gxila kwinto esifuna ukuyigxininisa (ihlala ihlonipha ubungakanani obuthile), iyasivumela ukuba siguqule ukubonakaliswa ngokulungisa ukukhanya kwesibane kwifoto, sandise okanye sinciphise umbala ngokufumana ithoni ngqo kwaye silungise kancinane ukugxila kugxile koko kubaluleke ngokwenene. ifoto.
Ukuba awukuqheli ukuntsokotha kunye nenani elikhulu lokukhetha esinikwa yiFotohop, usenakho IPixrl, ube sisisombululo kule ngxaki inkulu inkulu. I-Pixrl, njengenguqulelo ekwi-intanethi ye-Photoshop, ivumela ukuba sisebenze ngamanqanaba, esivumela ukuba songeze iziphumo ezahlukeneyo kwaye sijonge iziphumo kunye okanye ngokwahlukeneyo ngaphandle kokuqala ngaphezulu kwasekuqaleni. Iyahambelana neendlela ezimfutshane ezinqumlayo, ezilungele ixesha apho kufuneka senze umsebenzi uphindaphinde. Ikwasinika inani elikhulu lokucoca kunye neefonti ukwenza iifoto zethu zibe zezakho ngokupheleleyo.
Kodwa ukuba eyona nto siyifunayo kukwenza iifoto ezizezakho, hayi ukuhlela nje useto ezine, inkonzo ye-Intanethi PicMonkey yeyona besiyifuna. Enkosi ngePicMonkey yomhleli wefoto ekwi-intanethi sinokongeza iifilitha ezinomtsalane kunqakrazo olumbalwa, ukongeza isicatshulwa kwimifanekiso, ukongeza ukungqengqeleka kunye nezakhelo ezinomtsalane ezenziwe kunye Iimpawu zobume bokwenyani obukhulu kwiifoto. Kodwa ukuba asifuni ukufudumeza iintloko zethu kakhulu, sinokusebenzisa imixholo eyahlukeneyo esiyinikwa yile nkonzo, eminye imixholo eya kulungelelanisa iifoto zethu nomxholo ebesikhethe wona ngaphambili.
Ukuba ujonga inkonzo elula kwi-Intanethi, iPhotoFancy isenokuba yile nto uyifunayo. IfotoFancy ivumela ukuba siguqule ii-captures zethu ngomhleli weefoto ezikwi-Intanethi ngokukhawuleza nangaphandle kwengxaki. Ngale nkonzo sinokuphelisa amehlo abomvu, iifoto zezityalo, sisebenzise umfanekiso ngokuzenzekelayo ukuze singatshintshi useto ngesandla, ukusika, ukujikeleza, ukulungisa, ukongeza izakhelo kunye neziphumo ezihle ...
Enkosi kumhleli Canva, singanika iifoto zethu inkangeleko entsha nehlaziyiweyo, okoko nje sinomonde owaneleyo wokuzama ukhetho ngalunye olusinikwa sesi sicelo. Canva usinika inani elikhulu lokucoca ulwelo ukuguqula iifoto zethu zibe zezakudala, okanye ukubazisa ebomini ngesihluzo seholide.
Ikwasivumela lungisa ukukhanya, umahluko kunye nokugcwala komfanekiso wethu, ukongeza ekucaceni ukukhula okanye ukujikeleza ifoto ukugxila kwinto ebaluleke kakhulu. Ukuba sifuna ukongeza isakhelo kwifoto yethu sakuba siyilungisile, i-Canvas ayingomhleli weefoto kwi-Intanethi esasizifuna.
Ngobukeka obuphefumlelweyo be-Photoshop, SumoPaint isinika umhleli opheleleyo weefoto, esinokongeza kuzo iindlela ezahlukeneyo zokwenza iimvavanyo ngeefoto de sifumane iziphumo ezifanelekileyo, yongeza iifilitha, guqula amanqanaba okucoca ulwelo, ukugcwala kombala ...
Kodwa enye yezinto ezothusayo yeyokuba ukuba sisebenzisa esi sikrini sipheleleyo somhleli wefoto, singasebenzisa iqhosha lasekunene lempuku, umsebenzi omnandi osinikwa ngabahleli abambalwa. Inye kuphela kodwa esiyifumanayo yile ubhaliso luyafuneka ukuze ukwazi ukusebenzisa umhleli.
Umhleli ngamnye weefoto ezikwi-Intanethi endizichazayo kweli nqaku usinika ezalo iimpawu. iPiccy Iyaphuma kwabanye ngenxa yokuba kunokwenzeka ukuba isinike ngoku yenza iikholaji ezimnandi kunye neefoto zethu, iikholaji apho sinokongeza khona inani elikhulu lokucoca kunye neziphumo. Iifomati ezihambelana ne-jpeg kunye ne-png, ezinokuthi zinciphise ukusetyenziswa kwabanye abasebenzisi abasebenzisa ezinye iifomathi ezinje nge-tiff ngaphandle kokuya phambili, ifomathi enikezela ucinezelo oluncinci, kodwa oko kuthintela ukulahleka komgangatho wefoto.
Njengasicelo sangaphambili esinika into engekhoyo kwezinye, FotorIkwanomsebenzi okhethekileyo osivumela ukuba sidibanise iifoto ezahlukeneyo ukufezekisa iziphumo ezilungileyo ze-HDR. Esi sicelo siyathandeka kula matyala apho uthatha khona xa ufota okanye uphuma ushiyeke kakhulu okanye umnyama kakhulu. Ujongano lomsebenzisi lulula kakhulu kwaye ngawo onke amaxesha i-Fotor iyakusikhokela kwinyathelo ngalinye ekufuneka silenzile ukufumana iziphumo esizifunayo.
Njengokongezwa, ikwasivumela ukuba songeze iziphumo, iifilitha, izitikha, imacros, ukongeza isicatshulwa ... Ikwanokhetho lokwenza iikholaji, kodwa ayigqibanga njengePiccy. bucala ngasekhohlo kuphela kwenkonzo yokuhlela iifoto ekwi-intanethi esebenza ngetekhnoloji ye-HTML 5, idlula ngokupheleleyo iFlash.
Ngaba uyazi nawuphi na umhleli weefoto ezikwi-Intanethi esingazichazanga?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » Abahleli beefoto ezikwi-Intanethi
Inqaku elikhulu Nacho !!
Ngokukodwa, abahleli be-Intanethi bagqibelele kum, kuba ilaptop yomsebenzi ayikwazi ukufaka naluphi na uhlobo lwenkqubo.
INetflix iyirhoxisa iNdlu yeKhadi ngaphezulu kwezityholo zokuxhatshazwa kukaKevin Spacey
IMicrosoft yazisa iMicrosoft Surface Pro LTE ePhambili